Shina: Tovovavy iray avy ao Yunnan, niboridana ho fitakiana ny rariny · Global Voices teny Malagasy
Tsy mitombina ny tantarany hoy ireo mpanao gazety vitsivitsy
Voadika ny 15 Desambra 2020 2:15 GMT
Tsy ela akory izay, lasa iray tamin'ireo lohahevitra nafàna teny anatin'ny aterineto shinoa ny tantaran “ilay tovovavy nitanjaka tao Yunnan”. Nanapaka hevitra ny tovovavy iray 21 taona, Peng Chunping, fa hametraka ety anaty aterineto ny sariny, mitanjaka, mba hisintonana ny saina sy hakàna ny fanohanan'ny fiarahamonina. Voadikan'ny bilaogy ESWN [ho amin'ny fiteny anglisy] ny fanadihadiana manontolo natokan'ny gazety Southern Weekend ho an'ny lasan'ity tovovavy ity, ny tantaran'ny fitakiany sy izay nolalovany nandritra ny “fanoherany tamim-pitanjahana”.
Na izany aza, misy ihany ireo sasantsasany manisy lanja ny tantaran'i Peng Chunping ka mandray azy ho matotra, ary dia milaza amintsika momba ny fiarahamonina hatrany ifotony ao Shina izany, indrindra fa momba ireo niangaran'ny vintana tsy mahazo tohana sôsialy omena ireo saranga ambany indrindra eny anivon'ny vahoaka. Manamarika ilay vehivavy bilaogera Yghren [teny shinoa] fa na atao hoe manana olana ara-tsaina aza izy, tokony ho afaka manampy azy ny fiarahamonina :
Nanome tsodrano azy tamin'ny alàlan'ny fanehoankevitra iray napetrany tao amin'ny bilaoginy [teny shinoa] i Liu Xu, mpisera aterineto avy ao Sichuan, izay nizaka ny vokatry ny horohorontany :
Nisongadina indray ny anjara toerana sy ny fitsipi-pitondrantenan'ireo haino-vaky-jery. Manontany tena momba ny fandrakofana ataon'ny Southern Weekend an'ireo antony nahatonga ilay tovovavy hamoaka ny sariny mitanjaka ilay bilaogera 静夜思（Fisainan'ny Alina Tony) :